isitya esinye sokutshisela isitya sentsimbi esingenasici
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-P11 Ubungakanani obuCwangcisiweyo benziwe ngezinto zoMzimba 304 intsimbi engenasiphelo Gqibezela ukuCoca okanye ukubrasha Udidi Isitya esinye sokuPakisha ingxowa yePlastikhi kunye neenkcukacha zekhathoni Ulwazi lwefowuni ibandakanya AKUKHO IDreyina. Esi sitya singena sisitya senziwe ngentsimbi ekuvumela ukuba uhlambe izinto ezinkulu, sithintela ukuphuphuma kwikhawuntala yasekhitshini. Izitshixo zekhitshi ezenziwe ngesandla zenziwe ngentsimbi engenasici engama-304 yokuqina okuzinzileyo kunye nokunganyamezeli. Eyona nto ilungileyo ...
isitya esiphindwe kabini sokufaka isitya sentsimbi
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-P21 Ubungakanani obuCwangcisiweyo benziwe ngezinto zoMzimba 304 intsimbi engenasiphelo Gqibezela ukuCoca okanye ukubrasha Uhlobo lwesitya esiphindwe kabini Ukupakisha ingxowa yePlastikhi kunye nekhadibhodi Ulwazi lwezincedisi Ifomathi ibandakanya NO Drainage NO. Esi sitya siphindwe kabini sinika ubungakanani besitya esinye esitshini ngokusebenza kwesitya esiphindwe kabini. Ikuvumela ukuba uhlambe izinto ezinkulu ngaphezulu kwezitya zokuntywila, kuthintela ukuphuphuma kwikhawuntara yasekhitshini.
Icinezelwe isitya esinye ekhitshini lesinki yentsimbi
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-P08 Ubungakanani obuCwangcisiweyo benziwe ngezinto zoMzimba 304 intsimbi engenasiphelo Gqibezela ukuCoca okanye ukubrasha Udidi Isitya esinye sokuPakisha ingxowa yePlastikhi kunye neenkcukacha zekhathuni Isitya sokucofa sentsimbi esinezixhobo ezingenanto senza ukuba uhlambe izinto ezinkulu, sithintele ukuphuphuma kwikhawuntara yekhitshi. Izitshixo zekhitshi ezenziwe ngesandla zenziwe ngentsimbi engenasici engama-304 yokuqina okuzinzileyo kunye nokunganyamezeli. Elona liqabane ...
Intloko yeshawa emileyo efihliweyo
Inombolo yemodeli CP-2T-H30FJB Gqiba ukufakelwa okuKhazimlisiweyo kuludonga oluphezulu lobungakanani beeshawari zobude Ubude be-12 "(300mm) Ububanzi 12" (300mm) Ubukhulu 2mm Shower ingalo 400x25x14mm Ubungakanani bentloko yeshawa yeshawari eyi-25mm x 25x185mm , Isilicon Umxhubi 304 intsimbi engenasici, iplastiki yentloko yeshawari ephathekayo ye-304 intsimbi engenasici, i-silicon yokubamba ngesandla ishawa 304 ...
Udonga lubekwe entlokweni yentloko yeshawari
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-2T-H30YJB Gqibezela ukufakelwa okuKhazimlisiweyo kuludonga oluphezulu lobungakanani bemilinganiselo yeshawa Ububanzi be-12 "(300mm) Ubukhulu be-2mm i-Hanheld intloko yeshawari yobukhulu intloko yeshawa 304 intsimbi engenanto, i-silicon yokubamba ngesandla isepha yokuhlamba 304 intsimbi engenanto, iplastiki yesandla sokuhlamba isanti 304 ...